မော်ရင်ဟို Mourinho နေရာအစားဝင်ဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ နည်းပြများ
29 Aug 2018 . 5:09 PM
မန်ယူအသင်းရဲ့ နည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာ ကြိုးတန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရသလို ဖြစ်နေတာပါ။ အခုတစ်ပတ်မှာယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့် ဘန်လေအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာသာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် မန်ယူနည်းပြရာထူးကနေ မော်ရင်ဟို Mourinho ဟာထုတ်ပယ်ခံရမယ့် အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မော်ရင်ဟို Mourinho နေရာအစားဝင်ဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ နည်းပြတွေကို Goal.com အားကစားဝက်ဘ်ဆိုက်က အခုလိုပဲ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် . . .
(၁) ဇီဒန်း Zidane
မန်ယူနည်းပြရာထူးအတွက် ဇီဒန်း Zidane ဟာရေပန်းအစားဆုံးမှာရှိနေပြီး မန်ယူပရိသတ်အများစုဟာလည်း ဇီဒန်း Zidane ကို မန်ယူနည်းပြအဖြစ်မြင်တွေ့ချင်နေကြပါတယ်။ ကစားသမားဘ၀ Profile မြင့်ပြီး ရီးယဲလ်နည်းပြဘ၀မှာလည်း အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇီဒန်း Zidane ဟာ မန်ယူပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဇီဒန်း Zidane ဟာ ရီးယဲလ်အသင်းကို (၂)နှစ်ခွဲတာဝန်ယူခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံဆု(၃)ကြိမ်အပါအ၀င် တခြားဆုဖလားတွေကိုလည်းရယူခဲ့ပါတယ်။
(၂) ပိုချက်တီနို Pochettino
စပါးအသင်းနည်းပြ ပိုချက်တီနို Pochettino ဟာ မန်ယူနည်းပြရာထူးအတွက် မကြာခဏ ဆိုသလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသူပါ။ အသက်ငယ်ရွယ်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပိုချက်တီနို Pochettino ဟာ မန်ယူပရိသတ်တွေ အကြိုက်နည်းပြတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုချက်တီနို Pochettino ရဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာ စပါးအသင်းမှာ အမြဲလိုလိုမြင်တွေ့နေရတာကြောင့် မန်ယူနည်းပြရာထူးအတွက် ရေပန်းစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကွန်တီ Conte
ကွန်တီ Conte နဲ့ မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho တို့ဟာ စကားလုံးတိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ကြတာကြောင့် ဒီစာရင်းမှာ ကွန်တီ Conte ပါဝင်လာတာဟာ ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဂျူဗင်တပ်စ် နဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွေမှာ ကွန်တီ Conte ရဲ့အရည်အချင်းကို အားလုံးသိခဲ့ရတာကြောင့် မန်ယူနည်းပြရာထူးအတွက် ကွန်တီ Conte ကိုလည်း စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။
(၄) အယ်လီဂရီ Allegri
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့နည်းပြ အယ်လီဂရီ Allegri ဟာလည်း ဒီစာရင်းမှာပါဝင်နေပါတယ်။ စီးရီးအေချန်ပီယံဆုကို (၅)ကြိမ်အထိရရှိထားသူ အယ်လီဂရီ Allegri ဟာ မန်ယူအသင်းနည်းပြဖြစ်လာဖို့ အတွက် ရာခိုင်နှုန်းနည်းသူလို့ဆိုရမှာပါ။
(၅) ဘလန့် Blanc
ပြင်သစ်အသင်းနဲ့ PSG အသင်းတို့ရဲ့ နည်းပြဟောင်း ဘလန့် Blanc ဟာလည်း ဒီစာရင်းမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ဘလန့် Blanc အနေနဲ့ PSG အသင်းကို ဆုဖလားတွေအများကြီးရယူပေးခဲ့တာဟာ ပြောစရာမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဘော်ဒိုးလိုအသင်းကို ပြင်သစ်လီဂူးမှာချန်ပီယံဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာကိုတော့ ချီးကျူးကြရမှာပါ။ နည်းပြအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီး အရည်အချင်းလည်းရှိသလို မန်ယူကစားသမားဟောင်းပါဖြစ်နေတဲ့ ဘလန့် Blanc ဟာ မန်ယူနည်းပြရာထူးကို မျှော်လင့်ခွင့်ရှိပါတယ်။
(၆) ယာဒင်း Jardim
မိုနာကိုအသင်းနည်းပြယာဒင်း Jardim ဟာလည်း ဒီစာရင်းမှာပါဝင်လာပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ နည်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေကို အောင်မြင်မှုတွေရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ ယာဒင်း Jardim ဟာ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတစ်ဦးပါ။
(၇) ရွိုင်ယန်ဂစ် Giggs
မန်ယူပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ကစားသမား လက်ရှိဝေးလ်စ်အသင်းနည်းပြ ရွိုင်ယန်ဂစ် Giggs အနေနဲ့ ဒီစာရင်းမှာပါဝင်လာတာဟာ သိပ်ပြီးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မန်ယူအသင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ကစားသမားနည်းပြ အဖြစ်ယာယီတာဝန်ယူခဲ့ဖူးပြီး ဗန်ဟားလ် Van Gaal လက်ထက်မှာလည်း လက်ထောက်နည်းပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် ရွိုင်ယန်ဂစ် Giggs နဲ့ မန်ယူနည်းပြရာထူးဟာ သိပ်ပြီးစိမ်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ရွိုင်ယန်ဂစ် Giggs ကိုယ်တိုင်ကလည်း မန်ယူနည်းပြဖြစ်ချင်နေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝလာမလား ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်သွားကြရမှာပါ။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ နည်းပြတွေဟာ မန်ယူနည်းပြရာထူးအတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူနည်းပြရာထူးမှာ မော်ရင်ဟို Mourinho ဆက်ရှိနေမလား၊တခြားနည်းပြတစ်ဦးက အစားထိုးဝင်ရောက်သွားမလား ဆိုတာကတော့ …
Photo: Goal.com , arabic.rt.com , Evening Standard , tr.sputniknews.com , 10z Soccer, Airtel Uganda Football , prod-stadiumastro.pink.cat
မျောရငျဟို Mourinho နရောအစားဝငျဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ နညျးပွမြား
မနျယူအသငျးရဲ့ နညျးပွမျောရငျဟို Mourinho ရဲ့လကျရှိအခွအေနဟော ကွိုးတနျးပျေါမှာလမျးလြှောကျနရေသလို ဖွဈနတောပါ။ အခုတဈပတျမှာယှဉျပွိုငျကစားမယျ့ ဘနျလအေသငျးနဲ့ပှဲစဉျမှာသာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရငျ မနျယူနညျးပွရာထူးကနေ မျောရငျဟို Mourinho ဟာထုတျပယျခံရမယျ့ အနအေထားမှာရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မျောရငျဟို Mourinho နရောအစားဝငျဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ နညျးပွတှကေို Goal.com အားကစားဝကျဘျဆိုကျက အခုလိုပဲ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ . . .
(၁) ဇီဒနျး Zidane
မနျယူနညျးပွရာထူးအတှကျ ဇီဒနျး Zidane ဟာရပေနျးအစားဆုံးမှာရှိနပွေီး မနျယူပရိသတျအမြားစုဟာလညျး ဇီဒနျး Zidane ကို မနျယူနညျးပွအဖွဈမွငျတှခေ့ငျြနကွေပါတယျ။ ကစားသမားဘ၀ Profile မွငျ့ပွီး ရီးယဲလျနညျးပွဘဝမှာလညျး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ဇီဒနျး Zidane ဟာ မနျယူပရိသတျတှရေဲ့ အကွိုကျဖွဈနပေါတယျ။ ဇီဒနျး Zidane ဟာ ရီးယဲလျအသငျးကို (၂)နှဈခှဲတာဝနျယူခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျခနျြပီယံဆု(၃)ကွိမျအပါအဝငျ တခွားဆုဖလားတှကေိုလညျးရယူခဲ့ပါတယျ။
(၂) ပိုခကျြတီနို Pochettino
စပါးအသငျးနညျးပွ ပိုခကျြတီနို Pochettino ဟာ မနျယူနညျးပွရာထူးအတှကျ မကွာခဏ ဆိုသလိုသတငျးတှထှေကျပျေါနသေူပါ။ အသကျငယျရှယျပွီး အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ပိုခကျြတီနို Pochettino ဟာ မနျယူပရိသတျတှေ အကွိုကျနညျးပွတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ ပိုခကျြတီနို Pochettino ရဲ့ အရညျအခငျြးတှဟော စပါးအသငျးမှာ အမွဲလိုလိုမွငျတှနေ့ရေတာကွောငျ့ မနျယူနညျးပွရာထူးအတှကျ ရပေနျးစားနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၃) ကှနျတီ Conte
ကှနျတီ Conte နဲ့ မနျယူနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho တို့ဟာ စကားလုံးတိုကျပှဲတှေ ပွငျးထနျခဲ့ကွတာကွောငျ့ ဒီစာရငျးမှာ ကှနျတီ Conte ပါဝငျလာတာဟာ ထူးခွားတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ ဂြူဗငျတပျဈ နဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးတှမှော ကှနျတီ Conte ရဲ့အရညျအခငျြးကို အားလုံးသိခဲ့ရတာကွောငျ့ မနျယူနညျးပွရာထူးအတှကျ ကှနျတီ Conte ကိုလညျး စောငျ့ကွညျ့ကွရမှာပါ။
(၄) အယျလီဂရီ Allegri
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့နညျးပွ အယျလီဂရီ Allegri ဟာလညျး ဒီစာရငျးမှာပါဝငျနပေါတယျ။ စီးရီးအခေနျြပီယံဆုကို (၅)ကွိမျအထိရရှိထားသူ အယျလီဂရီ Allegri ဟာ မနျယူအသငျးနညျးပွဖွဈလာဖို့ အတှကျ ရာခိုငျနှုနျးနညျးသူလို့ဆိုရမှာပါ။
(၅) ဘလနျ့ Blanc
ပွငျသဈအသငျးနဲ့ PSG အသငျးတို့ရဲ့ နညျးပွဟောငျး ဘလနျ့ Blanc ဟာလညျး ဒီစာရငျးမှာပါဝငျနပေါတယျ။ ဘလနျ့ Blanc အနနေဲ့ PSG အသငျးကို ဆုဖလားတှအေမြားကွီးရယူပေးခဲ့တာဟာ ပွောစရာမဟုတျခဲ့ပမေယျ့ ဘျောဒိုးလိုအသငျးကို ပွငျသဈလီဂူးမှာခနျြပီယံဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျပေးခဲ့တာကိုတော့ ခြီးကြူးကွရမှာပါ။ နညျးပွအတှအေ့ကွုံကွှယျဝပွီး အရညျအခငျြးလညျးရှိသလို မနျယူကစားသမားဟောငျးပါဖွဈနတေဲ့ ဘလနျ့ Blanc ဟာ မနျယူနညျးပွရာထူးကို မြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိပါတယျ။
(၆) ယာဒငျး Jardim
မိုနာကိုအသငျးနညျးပွယာဒငျး Jardim ဟာလညျး ဒီစာရငျးမှာပါဝငျလာပမေယျ့ ဖွဈနိုငျခကြေတော့ နညျးတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့အသငျးတှကေို အောငျမွငျမှုတှရှောဖှပေေးနိုငျတဲ့ ယာဒငျး Jardim ဟာ အရညျအခငျြးပွညျ့ဝသူတဈဦးပါ။
(၇) ရှိုငျယနျဂဈ Giggs
မနျယူပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောကစားသမား လကျရှိဝေးလျဈအသငျးနညျးပွ ရှိုငျယနျဂဈ Giggs အနနေဲ့ ဒီစာရငျးမှာပါဝငျလာတာဟာ သိပျပွီးဆနျးတဲ့အရာတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။ မနျယူအသငျးကို ၂၀၁၄ ခုနှဈက ကစားသမားနညျးပွ အဖွဈယာယီတာဝနျယူခဲ့ဖူးပွီး ဗနျဟားလျ Van Gaal လကျထကျမှာလညျး လကျထောကျနညျးပွအဖွဈဆောငျရှကျခဲ့တာကွောငျ့ ရှိုငျယနျဂဈ Giggs နဲ့ မနျယူနညျးပွရာထူးဟာ သိပျပွီးစိမျးတဲ့အရာမဟုတျပါဘူး။ ရှိုငျယနျဂဈ Giggs ကိုယျတိုငျကလညျး မနျယူနညျးပွဖွဈခငျြနတောကွောငျ့ သူ့ရဲ့ဆန်ဒတှပွေညျ့ဝလာမလား ဆိုတာကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့သှားကွရမှာပါ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တဲ့ နညျးပွတှဟော မနျယူနညျးပွရာထူးအတှကျရပေနျးစားနတေဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ မနျယူနညျးပွရာထူးမှာ မျောရငျဟို Mourinho ဆကျရှိနမေလား၊တခွားနညျးပွတဈဦးက အစားထိုးဝငျရောကျသှားမလား ဆိုတာကတော့ …